Yemagariro Media Kushambadzira Zvikanganiso Iwe Zvaunofanira Kudzivisa | Martech Zone
Yemagariro Midhiya Kushambadzira Zvikanganiso Iwe Zvaunofanirwa Kudzivisa
Svondo, July 5, 2015 Svondo, July 5, 2015 Douglas Karr
Kazhinji kazhinji kwete, ini ndirikunzwa makambani mazhinji uye akawanda achitaura nezvemagariro enhau sekunge ingoriwo imwe nhepfenyuro. Zvemagariro midhiya zvakapfuura ipapo. Zvemagariro midhiya zvinogona kuongororwa kuti zvive nehungwaru, kuongororwa kuongororwa uye nemikana, inoshandiswa kutaurirana netarisiro uye vatengi, inoshandiswa kunongedza nekusimudzira zita rako kune vateereri vanokodzera, uye yakakwidziridzwa kuwedzera chiremera chevashandi vako nemukurumbira.
Chero zano rinoshanda rekushambadzira kwedhijitari rinosanganisira chinhu chakapindirana icho chiri chezvenhau. Kutanga kana kuti kwete, ndeimwe yemapuratifomu akanakisa edhijitari ekusimudzira mabhizinesi kumberi nekukurumidza, chero kushambadzira midhiya yenhau kwaitwa nemazvo. Kune vatsva kune indasitiri yekushambadzira yedhijitari, kugadzira yakanaka yekutanga maonero pasocial media kwakanyanya kutsoropodza sezvo ivo vanongowana mukana mumwe chete kuti zviite zvakanaka. Kurasikirwa nemukana iwoyo zvinoreva kusaririra kumashure kwevakwikwidzi uye kugadzirisa mukurumbira iyo pachayo isiri basa rakareruka. Jomer Gregorio, Kushambadzira Dhijitari Philippines
Heano maSocial Media Kushambadzira Zvikanganiso zvekudzivisa
Kusina zvemagariro vezvenhau zano chero.
Kugadzira maakaundi pa mapuratifomu akawandisa nekukurumidza.
Kubhadhara vateveri venhema.
Kutaura zvakanyanya nezve iyo mhando uye iyo mhando chete.
Uchishandisa zvisina basa uye akawandisa ma hashtag.
Kugovana zvakawandisa inogadziridza munguva pfupi. (Asi iwe unogona kunge usiri kugovana nguva zhinji sezvaungagone)
Kukanganwa ku kuverenga.
Kuregeredza iyo mumagariro mamiriro enhau enhau.
Mazhinji emakanganiso aya akafanana neakare infographic isu takagovana pairi bhizinesi rezvenhau zvikanganiso. Chinhu chimwe chete chakakosha chandingawedzera pane izvi ndechekuti iwe unofanirwa kugara uchiedza kuvaka kukosha pamwe nekutungamira vateveri vako kuenda kune yekufona kuti iite. Ini handireve kukanda neese marongedzero, uchingo chengeta mupfungwa kuti zano rako rinofanira kusanganisira rinotungamira mitezo mitezo vateereri vadzokere kuchiratidzo chako kuti vatevere, fan, demo, kurodha pasi, kunyorera kana kushandura.
Tags: digital kushambadzira Philippinespasocial media infographicSocial Media Marketingpasocial media kushambadzira zvikanganisozvemagariro midhiya zvikanganiso
Maitiro Ako Brand Yaunogona Kubudirira nayo Vine Kushambadzira
Mar 12, 2016 pa 11: 11 AM
Bvumirana zvizere nezvikanganiso zvawataura pamusoro apa.
Aya ndiwo anowanzo kanganisa pasocial media anoitwa nevanhu. Midhiya yemagariro ndiyo yechipiri nzvimbo dzakanakisa mukutyaira vangangove vatengi uye vaverengi mushure mekutsvaga injini.
Pamwe chete nezvikanganiso izvi, kusapa nguva dzose zvigadziriso zvakare kukanganisa kwakajairika sezvandinofunga. Ndakaona mhando dzakawanda paFacebook dzisingambotarisi vateereri vavo ndosaka vasina kubatikana.
Vanhu vanogara vachida varaidzo kana chimwe chinhu chinogona kuzvichengeta vakabatikana uye Kana chero mhando isiri kupa mhando yezvinyorwa saka panogona kuve nemikana yakakura yekuti vateereri vakanganwa zita remhando yavo.
Saka kuti vachengete zita ravo mupfungwa dzevateereri vavo, vanofanirwa kupa zvemukati izvo zvinogona kubatsira, kuvaraidza uye kuchengeta vateereri vavo vakabatikana.
Ndinofara kuti wataura aya makuru ekukanganisa pasocial media. Saka Tinotenda nekugovana nesu. 😀
Mar 13, 2016 pa 3: 43 PM
Ndatenda nekuwedzera kwako - bvuma zvachose David!
Jul 11, 2016 na11:22 PM
Maita basa nekunzwisisa kukuru uye zviyeuchidzo! Zvose izvi ichokwadi. Ndinobvuma zvakasimba! Kutumira zvinyorwa zvakawandisa munguva pfupi ndeye kukanganisa uye ini ndinowanzosangana nedambudziko iri. Ndichiri kuyeuka ndichiri muvambi, ndaitumira zvinyorwa katatu pazuva uye vanhu vakangozvifuratira zvakanyanya kana musoro wacho usingafadze uye vaverengi vasingakwanisi kurondedzera. inofanira kugara ichiongororwa. Great post!